Facebook နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း အသစ် APK - 13.0.0.0.11.နေဇော်လင်း (နည်းပညာများ)
Home » Android , Apk , Download , Facebook , Software » Facebook နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း အသစ် APK - 13.0.0.0.11.
Facebook နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း အသစ် APK - 13.0.0.0.11.
Written By နေဇော် လင်း on Sunday, August 3, 2014 | 6:36 AM
Facebook နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း အသစ် APK - 13.0.0.0.11. Facebook နောက်ဆုံးထွက် Apk ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မအားလို့ အခုမှ တင်ပေးဖြစ်တာပါ။ တောင်းထားတဲ့ သူတွေက အများကြီးပဲ အသစ်ဆိ်ုတော့ အရင်အဟောင်းတွေထက် ပိုပြီး နည်းပညာတွေ အဆင့်မြှင့်လာပါတယ်။
VIDEO ကြည့်ရင် တင်ထားတဲ့ VIDEO တွေကို တစ်နေရာတည်း တန်းစီးပြီး စုပေးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းတိုင်းတော့ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့ဖုန်းတွေက ၁၀ တို့ ၉ တို့လောက်နဲ့ အဆင်ပြေတာ ရှိပါတယ်။ Facebook Apk အသစ်ထည့်မယ်ဆိုရင် အဟောင်းကိုဖျက်ပြီး ထည့်ပြီး အစမ်းသုံးကြည့်ပေါ့ဗျာ။
အရေးကြီး တစ်ခု သတိပေးဖို့ ကျန်သေးတယ်။ Facebook Apk 13 ကိုဖုန်းထဲထည့်ပြီးရင် Facebook သုံးခါနီး အင်တာနက်လိုင်းကို အရင်ချိတ်ထားပါ။ လိုင်းကို မဖွင့်ပဲ Facebook Apk ကိုအရင်ဖွင့်မိရင် အော်တိုပြန်ပိတ် သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုဖြစ်ရင် စိတ်မပူပါနဲ့ အင်တာနက်လိုင်းကို အရင်ဖွင့်ပြီး Facebook Apk ကိုပြန်ဖွင့် ကြည့်ပါ။ အိုကေ သွားလာလိမ့်မယ်ဗျာ ။အဆင်ပြေရင် လက်ခုပ်သံလေး ကြားချင်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုက်က 21.MB ကျော်ပဲရှိပါတယ်။ လိုအပ်ရင် အောက်ပါ လိပ်စာလေးကို နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ဒေါင်းယူပါ။
Free Online Tv Website - www.nayzawlin.com
Free Media Website - www.malaysiaonlineradiomedia.com
Free Facebook Page - https://www.facebook.com/nayzawlin17
Posted by နေဇော် လင်း at 6:36 AM
Labels: Android, Apk, Download, Facebook, Software
Advertise (1) Android (8) Apk (6) Astrologe (1) Blog (1) Book (1) Browser (6) Cartoon (2) Computer (27) Dictionary (1) Download (11) E-Book (2) Facebook (4) Firefox (3) Folder (2) Folder Lock (1) Games (7) Gmail (2) Gmail Hack (1) Gtalk (2) Guides (5) Hacking (1) Interview (2) Introduce (1) Liters (1) Malaysia (3) Mobile (5) Music (2) Office Tip (2) Password (2) Photo (3) Photo Editor (2) Player (1) Portable (1) Proxy (1) Reader (1) Shortcut (1) Shredder (1) Software (26) Technique (63) Templates (2) Tool (1) USB (1) Video (6) Video Cutter (1) Video Recorder (1) Video Upload (1) Virus (3) VLC Player (1) Web Development (1) Wifi (2) Window7(13) Windows (1) Zawgyi Font (2)
Bo Bo မြန်မာ ကာတွန်း ဆိုက်လေးပါ။
ဒါလေး ကတော့ မြန်မာကာတွန်းဆိုက်လေးပါ။ ကာတွန်းဖတ်ချင်တဲ့ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် ကိုကို မမတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဂိမ်းဆော့ ချင်တဲ့ မောင်လေး ညီမလေးတေ...
မြန်မာ ဇတ်ကားလေးတွေ ကြည့်ကြမယ်။
အွန်လိုင်းမှ မြန်မာ video ကြည့်ချင်သော မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအတွက် သွားရောက်ကြည့်ရှု နိုင်သော ဆိုက်လေး တစ်ခုပါ။ ဒီဆိုက်လေးမှာ မြန်မာ ...
လူငယ် အကြိုက်ဆုံး သီချင်းများ စုစည်းမှု 1
မင်္ဂလာပါ။ ကောင်းနိုးရာရာ သီချင်းလေးများကို စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေများ နားဆင်နိုင်ရန် အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အလည်ရောက်လာကြသော မိတ်ဆွေများ လ...
စာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် .....
စာပေချစ်သူ စာပေမြတ်နိုးသူ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအတွက် Ebook စာအုပ်များကို ဒေါင်းပြီး ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ စာအုပ်တွေလည်း များတယ်။...
ကွန်ပျူတာကို မဟန်းအောင် အသုံးပြုမယ် (ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ)
နေ့တိုင်း ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတိုင်း သိသင့်တယ်ထင်လို့ မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း သိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ ဟန်းနေရင် အတော်ေ...
ဗေဒင် နှင့် နက္ခတ် အကြောင်း
မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် နှင့် နက္ခတ် အကြောင်း လေးတွေ စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင် http://mmastrology.myanmarbloggers.org/
ဒီတစ်ခါ မသိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေများကို အွန်လိုင်းမှ ၂၄ ဘာသာကို မြန်မာလို အလွယ်တကူ ပြန်လို့ရတဲ့ Web Site လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ http://www.m...
Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေ အတွက် Beautiful Quick Setting Software
အခုပေးမယ့် Beautiful Quick Setting ဆော့ဝဲလေးက Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။ Android ရဲ့ အလိုအပ်ဆုံ...
Gmail Hack လိုချင်သော သူငယ်ချင်းများ အတွက် Gmail Hack လေးဖြစ်ပါတယ်။ မေးဟက်ရတာ ဝါသနာ ပါသော သူတစ်ပါး အကောင့်တွေ စမ်စုတာ ဝါသနာပါသော သူငယ်ချ...
Facebook ,Like လုပ်ပြီးဖုန်း APK များ စုစည်းမှုများကို ရယူနိုင်ပါသည်။
အကြည့်အများဆုံး TV လိုင်းများ - 2
Photoshop ကို အခြေခံကနေစပြီး ကျွမ်းကျင်နီးပါးအဆင့်ထိ သင်ကြားချင်တဲ့သူတွေ အတွက် E-Book
ကျွန်တော် ဒီ တစ်ခါတော့ ကျွန်တော့ အစ်ကို ကိုနေဇော်လင်း ဆိုဒ်လေးကို အားပေးကြတဲ့ စာဖတ် ပရိတ်သတ်တွေ အားလုံးအတွက် ကျွန်တော်က လက်ဆောင် လေးတစ်ခ...
Virus ကြောင့် USB က File တွေ Shortcut ပုံများ ပြောင်းသွားရင်ဖြင့်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ USB Flash Drive ကို Virus ကိုက်လိုက်လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ Flash Drive Icon လေးတွေ ပြောင်းသွားမယ် Folder တစ်...
USB Stick မတပ်မီ ဗိုင်းရပ်စ် မ၀င်အောင် ကာကွယ်ကြမယ်
ဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ် ကာကွယ်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှတ်တမဲ့နဲ့ မကွာကွယ်ကြတာများပါတယ်။ Kasper 2010 လို့ USB ကနေတက်လာတဲ...
Free Online Radio (Malaysia)
Copyright © နေဇော်လင်း (နည်းပညာများ)
1.1.2014 ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ဖရီးဝဘ်ဆိုဒ် ဖြစ်သည်။